Kunze kwekuchengetedza varimi vembanje | MyWeedSeeds.com
kuchengetedzwa uye chengetedzo matipi /
kuchengetedzwa kwekunze kwevarimi vembanje
Kuchengetedzwa kwekunze kwe varimi vembanje
Vazhinji vanhu vanogona kutarisa kwakatenderedza muyadhi wekurima mbanje uye vasina kana kucherechedza mbanje dzichikura kumashure nekuda kwekuti zvirimwa izvi zvinowirirana zvakadii. cherechedzwa kana akakura padyo nemiti iyo yakaenzana saizi kana kureba. Iwe unogona kutokura zvirimwa zvembanje zvakareba mukati meboka remiti woita kuti zvivhengane kusvika pakusaoneka. Zvese zvaunofanirwa kuita kuita kudzora kuti ndiani anokwanisa kuwana nzvimbo uye zvirimwa zvako zvinokwanisa kukura murunyararo. Kana iwe ukaisa zvisina kurongeka zvirimwa zvako, uchizviparadzanisa kubva kune imwe neumwe, mune yako yazvino kugadzirwa kwenzvimbo kwavanogona kurohwa nezuva kwenguva yakareba, iwe uchave nekukura kwakanaka uye zvirimwa zvinoenderana munzvimbo yavo.
Kana uchikwanisa, tarisa kutenderedza kuti uwane marudzi embanje anotaridzika semiti yauinayo munzvimbo yako yazvino. Kana iwe uchida mbanje dzako kuti uve neruvara rwegreen kuti usanganise nemidzi yako yazvino, imwe nitrogen [N] ichaita hunyengeri. Isu takatonzwa nezvevarimi vanonamira maruva kumiti yavo yembanje kuvabvumira kuti vasangane nemakwenzi akakomberedza. Kana vavakidzani vako vakakuona kunze kwehusiku pamwedzi wakazara, ita sekunge urikungocheka patsangadzi yako kana kuita basa rakajairika redare uye unozodzoka mukati chaimo panzvimbo pekumutsa kufungirana. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuchera rakakodzera saizi gomba remuti wako uye isa yako mbanje chirimwa mukati megomba. Kana iwe ukaviga hari yako zvakadzika zvakakwana, iwe unogona kutema zvakaringana kunge tsoka (30 cm) kubva pakureba. Iwe unogona kutora kunyange misoro yemiti yako mbanje uye unomhanya navo pamwe nekushora trellises kuti ivo vakure yakatwasuka. Izvi zvinochengeta chirimwa chako chiri pasi pe3 '(90 cm) yehupenyu hwayo, izvo zvinonyatso sanganisa mune zvisinei nekuti vavakidzani vako vari sei. Aya marudzi emiti yemanjejuan anogona kutokura kunze pachena pachena pasina munhu anoona. Mushure mezvose, kangani iwe pawakambonzwa nezvevavakidzani vanokokwa kuti vafarire barbeque pasina chero munhu akamboona iyo yakanaka mbanje miti inokura padivi pefenzi?